सूचना-प्रविधि Archives - Mitho Khabar
October 19, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने !
नेपाल टेलिकमले व्यालेन्स नहुँदा पनि कुरा गर्न सकिने अफर ल्याएको छ । लकडाउनमा ब्यालेन्स न्यून भई आफन्तसँग सम्पर्क गर्न नपाएका करीब दुई लाखभन्दा बढी सिम प्रयोगकर्ताका लागि सोमबार राती १२ बजेदेखि निःशुल्क सेवा शुरु गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीको निर्देशनमा ब्यालेन्स न्यून भएर कल गर्न असमर्थ नम्बरका लागि जिरो […]
September 21, 2020 September 21, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on वाईफाईको स्पीड बढाउने सजिला उपाय
वाईफाईको स्पीड बढाउने सजिला उपाय वाईफाई एक प्रकारको चुम्बकीय तरंग हो जसले एउटा निश्चित दुरीसम्म इन्टरनेट कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउन सक्छ । तर केही यस्ता कारणहरु छन् जसले यसको तरंग (सिग्नल) कमजोर हुन्छ र इन्टरनेट एकदमै ढिलो चल्दछ । तर शक्तिशाली वाईफाई सिग्नलले तपाईलाई तीव्र गतिमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउँछ र यसको काम पनि तीव्र हुन्छ । […]
September 19, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on इलामका पाँच युवाहरुद्धारा कोरोना अस्पतालमा प्रयोग गर्न मिल्ने रोबोट निर्माण ! जान्नुहोस् ; कसरी गर्छ त काम ?
इलामका पाँच युवाहरुद्धारा कोरोना अस्पतालमा प्रयोग गर्न मिल्ने रोबोट निर्माण ! जान्नुहोस् ; कसरी गर्छ त काम ? काठमाडौं । इलामका युवाहरुले यन्त्र (रोबोट) निर्माण गरेका छन् । पाँच युवाले कोरोना अस्पतालमा प्रयोग गर्नेगरी सो यन्त्रको निर्माण गरेका हुन् । निर्माण गरेको यन्त्रलाई इलाम अस्पतालमा प्रदर्शनसमेत गरिएको छ । कोरोनाका कारण बिरामीलाई औषधि दिन चिकित्सक […]
July 6, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on १० जना चढ्न मिल्ने यस्तो बाइक !
१० जना चढ्न मिल्ने यस्तो बाइक ! सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ– एउटा बाइकमा १० जना चढ्न मिल्छ भनेर । दुइ, तीन जनासम्म बाइकमा चेढेर यात्रा गरेको देखेका हामीलाई एक बाइकमा १० जना चढ्न मिल्छ भन्दा पत्याउन पनि गाह्रो पर्ला । यद्यपि एकसाथ १० जना बस्न सक्ने बाइक पनि प्रचलनमा छ । बस्न मात्र होइन, यसमा […]
April 19, 2020 mithokhabarLeaveaComment on लकडाउन भर पैसा नतिरे पनि इन्टरनेट लाइन काट्न नपाइने
पछि पैसा तिर्दा जरिवाना लिन नपाइने काठमाडौँ — इन्टरनेटबापत्को भुक्तानी महसुल नतिरे पनि लकडाउन अवधिभर सेवा अवरुद्ध नगर्न सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै पछि भुक्तानी गर्दा कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क नलिन पनि सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। लकडाउनको अवधिमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र […]
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहमा नयाँ अफर ल्याएको छ । टेलिकमले मुलुकमा लकडाउन घोषणा हुँदा दिएको अफर पुन दोहोर्याएको हो । टेलिकमले जीएसएम सेवामा डाटा प्याक अन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा रु. १ सयमा १ जीबी डाटा खरिद गर्दा ३ जीबी डाटा बोनस स्वरुप प्राप्त हुनेछ र प्राप्त हुने बोनस कम्पनीको फोरजी नेटवर्कमा ५ दिनभित्र खपत गर्नुपर्नेछ […]
लामो समयदेखि घरमा बस्नु पर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ वा छोरा-छोरीको पढाईमा असर पर्यो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने, घरमै वसेर कम्प्युटर, स्मार्ट फोन र टेलिभिजन मार्फत पनि पढ्न र सिक्न सकिने अवसर हामीसंगै छन । नेपालकै पाठ्यक्रममा आधारित यी डिजिटल कण्टेन्टहरुले नयां कुरा सिक्न वा विद्यालयमा नबुझेका पाठहरु घरमा बसीबसी रमाईलो तरिकाले सिक्न सकिन्छ । ओलई नेपाल […]
April 1, 2020 mithokhabarLeaveaComment on रिचार्ज बराबर बोनस ब्यालेन्स दिने नेपाल टेलिकमको निर्णय
March 25, 2020 Arjun ThapaLeaveaComment on टेलिकमले ल्यायो रिचार्ज बराबरकै बोनस योजना, आजै लागू हुने
काठमाडौं: अहिले विश्व कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमणको आतंकमा छ । नेपालले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सिङ्गो देश लकडाउन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आफन्तको हालखबर बुझ्न मोवाइलमा पर्याप्त व्यालेन्स हुन जरुरी हुन्छ । तर, लकडाउनका कारण घर अरु बेला जस्तै जतिखेर पायो त्यहिखेर बाहिर निस्केर रिचार्ज किन्न समस्या हुन्छ । यहि अप्ठ्यारो अवस्थालाई मध्यनजर […]
March 22, 2020 Arjun ThapaLeaveaComment on नोकियाले ल्यायो पहिलो पटक ५ जी फोन, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं – कुनै समय मोबाइल उत्पादकहरुको दुनियाँमा एकछत्र राज गरेको नोकिया कम्पनीले पहिलो पटक ५ जी स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ ।नोकियाको आधाकारिक वितरक एचएमडी ग्लोबलले नोकिया ८.३ ५जी स्मार्टफोन लन्च गरेको हो । यस्ता छन् विशेषता यो प्रिमियम मिड रेन्जको स्मार्टफोन हो । यो नोकिया ८.१ को अपग्रेड भर्सन हो । यो फोनमा स्न्यापड्रागन ७६५ […]